भाडामा बस्नेसँग अबैध सम्बन्ध राख्ने श्रीमतीले नै गरे श्रीमानको हत्या ! -
Homeसमाचारभाडामा बस्नेसँग अबैध सम्बन्ध राख्ने श्रीमतीले नै गरे श्रीमानको हत्या !
भाडामा बस्नेसँग अबैध सम्बन्ध राख्ने श्रीमतीले नै गरे श्रीमानको हत्या !
एजेन्सी। पंजाबको लुधियानास्थित ढँडारीमा बस्ने एक व्यक्तिले आफ्नो घर मालिकको हत्या गरेका छन्। ती व्यक्तिको हत्या गराउने अरु कोही नभएर उनकी श्रीमती रहेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
मृतकको नाम मुकेश हो भने उनकी श्रीमतीको नाम संगीता हो। संगीताको श्याम पासवान भन्ने व्यक्तिसँग अवैध सम्बन्ध थियो, जो संगीताको घरमा भाडामा बस्थ्यो।
यी दुवैको प्रेममा मुकेश वाधन भएपछि उनीहरुले मुशेकलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउने निर्णय खतरनाक योजना बनाए।
यो घटना १४ अगस्टको हो। मुशेक आफ्नो घरको छतमा सुतिरहेका थिए। निही मस्त निन्द्रामा थिए। त्यति नै बेला छतमा श्याम र संगीता पनि पुगे। प्राप्त जानकारी अनुसार संगीताले मुकेशको हात खुट्टा समातिन् अनि श्यामले मुकेशको शिरमा हथौडाले प्रकार गरे। हथौडाले प्रहार गरेपछि मुकेशको तत्काल निधन भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार श्याम र संगीताबीच विगत ६ वर्षदेखि अवैध सम्बन्ध थियो। तर मुकेसकै कारण उनीहरुबीच राम्रोसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका थिएनन् र त्यही कारण मुकेशको हत्या गरेको बुझिएको छ।
प्रहरीका अनुसार हत्याको भोलिपल्ट मुकेशको शव छतमा रगत लतपतिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले सोधपुछका क्रममा मुकेशका भाइ राकेससँग सम्पर्क गर्यो। राकेशले पनि आफ्नी भाउजूको श्यामसँग अवैध सम्बन्ध रहेको बताए। प्रहरीले सामान्या सोधपुछ पनि श्यामलाई छोडकेको थियो।
तर उनले संगीतासँग मिलेर शहर छोड्ने योजना बनाएपछि उनलाई फेरि पक्राउ गरेको छ। मुकेशले श्याम र संगीतालाई आपत्तिजनक अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेका थिए।
आफ्नै श्रीमती भाडामा बस्नेसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेपछी....
तीनजना चकलेटी अभिनेतासंग एकैपटक रोमान्स गर्दै दिपिका (भिडियो सहित)